१४ वर्षीया एक बालिकालाई सामूहिक बला**त्कार गरेको ठहर गर्दै १२ वर्ष जेल चलान ! - PUBLICAAWAJ
१४ वर्षीया एक बालिकालाई सामूहिक बला**त्कार गरेको ठहर गर्दै १२ वर्ष जेल चलान !
प्रकाशित : मङ्गलबार, असार २४, २०७६०७:५८ पब्लिक आवाज /संवाददाता
लमही, २४ असार/दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत दाङले सामूहिक बला**त्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुईलाई १२÷१२ वर्ष कैद फैसला गरेको छ । अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावतको इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ का २७ वर्षीय इन्द्रबहादुर थापा र सोही ठाउँका ३१ वर्षीय थम्मन भन्ने गुरुप्रसाद पुनलाई १२÷१२ वर्ष कैद फैसला सुनाएको हो ।
उनीहरुलाई १४ वर्षीया एक बालिकालाई सामूहिक बला**त्कार गरेको ठहर गर्दै १२÷१२ वर्ष कैद र पीडितलाई दुवैबाट रु ५०÷५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको । विसं २०७१ असार २३ गते बालिकालाई बला**त्कार गरी सोही दिनदेखि दुवै फरार थिए । फरार दुवैलाई विसं २०७५ पुस १८ गते प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो ।
यस्तै अदालते घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का ऋषिराज आचार्यलाई बला**त्कार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका आचार्यलाई निर्दोष रहेको भन्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पङ्ज्ञानीको इजलासले सफाइ दिएको हो । घरमा काम गर्न राखेकी एक बालिकालाई पटक–पटक बलात्कार गरेको भनी मुद्दा परेपछि प्रहरीले आचार्यलाई पक्राउ गरेको थियो ।
मालपोत कार्यालयमा अख्तियारको छापा, घुस सहित रंगे हात २ जान पक्राउ !